Faanaa Broodkaastiing Koorporeet /FBC Afaan Oromoo/ toora Feesbuukii isaarratti mataduree “bara kana dhaabbileen mootummaa 400 tajaajila ‘online’ akka laataan hojjetamaa jiraachuu ibsame” jedhuun oduu maxxanseera. – ኢትዮጵያ ቼክ
Faanaa Broodkaastiing Koorporeet /FBC Afaan Oromoo/ toora Feesbuukii isaarratti mataduree “bara kana dhaabbileen mootummaa 400 tajaajila ‘online’ akka laataan hojjetamaa jiraachuu ibsame” jedhuun oduu maxxanseera.
Dhaaabbatichi oduu kana Ministeera Inoveeshinii fi Tekinoloojii wabeeffachuun hojjete.
Haa ta’u malee gabaasni FBC Afaan Oromoo ibsa Ministeerri Inoveeshiniifii Tekinoloojii toora Feesbuukii isaarratti maxxanseen kan wal faallessudha.
Ministeerichi bara 2014 keessa tajaajilawwan mootummaa 400 gama ‘online’ laachuuf hojjetamaa jiraachuu hime.
Haa ta’u malee FBC Afaan Oromoo ‘dhaabbileen mootummaa 400 tajaajila ‘online’ akka laataan hojjetamaa jiraachuu’ hime.
Kanaaf akka ibsa Ministeera Inoveeshiniifii Tekinoloojii irraa hubachuun danda’amutti lakkoofsi 400 lakkoofsa dhaabbilee mootummaa osoo hintaanee lakkoofsa gosoota tajaajilaa kan agarsiisudha.
Dabalataan dhaabbatichi ibsa isaa keessatti lakkoofsa dhaabbilee mootummaa tajaajila ‘online’ kennaa jiran ykn akka kennaniif hojjetamaa jiru hin ibsine.
Gama biraatiin Ministeerri Inoveeshiniifii Tekinoloojii waggoota 10 itti aanan keessatti tajaajilawwan mootummaa 2,500 gama ‘online’ kennuuf akka hojjetamu beeksiseera.